आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैः के छ एमालेको रणनीति ? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैः के छ एमालेको रणनीति ?
आज प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दैः के छ एमालेको रणनीति ?
Sindhu Khabar सोमबार, २०७८ असोज ४ / ०७:३६
असोज ४ । नेकपा एमालेको अवरोध चेतावनी तथा बजेट होली डे का कारण श्रृजीत संकट कै बीच आज सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । संसद सचिवालयले बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमका अनुसार, आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकका छ वटा कार्यसूची रहेको छ । एमाले सांसदहरुले अवरोध नगरेमा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवस्थापन कार्यमार्फत चार वटा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछन् । मन्त्री शर्माले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक विचार गरियोस् भन्नका लागि प्रस्ताव र आर्थिक विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि दिन तोक्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
आजको वैठकमा नेकपा एमालेको भुमिका कस्तो हुन्छ भन्ने अझै निश्चित् छैन । एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध महा अभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने चेतावनी दिई रहेको छ ।